Aretina izay mahatonga ny alika hijanona tsy hivovo | Alika Manerantany
Aretina manakana ny alika tsy hibontsina
Manoloana ny fihetsika tsy mahazatra ataon'ny biby fiompintsika, ny zavatra mety indrindra dia ny mpanara-maso ary mitondra izany any amin'ny mpitsabo rehetra raha ilaina izany mba hahitana diagnostika ara-potoana, ary na dia mahazatra ny alika aza ny ankamaroan'ny aretina izay iaretan'ny olona, ​​dia dia azo inoana fa ny aretina sasany izay mijaly dia vokatry ny sasany mutation ny aretina voadona (manomboka amin'ny olona ka hatramin'ny biby na ny mifamadika amin'izany) ary noho izany, ireo faharatsiana ireo dia mety ho azo fantarina sy azo tsaboina.
Misy koa tranga hafa izay fanontaniana tsotra fotsiny kilemaina ara-batana ny biby fiompintsika, satria mety ho anomaly amin'ny fihinany.
1 Antony tsy ahafahan'ny alikantsika mivovo
2 Aretina iharan'ny alika amin'ny feo
2.2 Fivontosana, fivontosan'ny taonina ary kohaka kennel
2.3 Paralysisa laryngeal
3 Antony hafa mahatonga ny alikanao tsy hivily
3.1 Fanesorana tadim-peo
3.2 Tra-boina fanararaotana
3.4 Karazan'alika izay tsy mivonto
4 Inona no hatao mba hitifiran'ny alika ahy indray?
Antony tsy ahafahan'ny alikantsika mivovo
Noho ny antony tsy hay hazavaina, raha sahirana ny alikantsika rehefa mivovo na mamoaka feo tsy dia mahazatra fotsiny dia tsara kokoa raha mihaona amin'ny mpiara-mitory amintsika olana anatomika, Ka eto ambany dia hilaza aminao kely momba ny zavatra hatao amin'ity tranga ity izahay.
Ny olana mivovo dia azo fintinina amin'ny larynx, indrindra ny tadim-peo, ary omena ny hateviny ny tadin'ny alika, afaka mibontsina amin'ny heriny lehibe izy ireo.
Ny larynx dia manana ligament mifatotra amin'ny cartilage, ireo ampahany izay manana fikorianan'ny rivotra sy ny tsindry mety hamoaka feo somary matanjaka.
Ny iray amin'ireo fanazavana tsotra indrindra amin'ny kohaka amin'ny alika dia ny habetsaky ny moka mijanona amin'ny tadim-peo ary mahatonga ny reflex kohaka rehefa miteny sy mamoaka feo. Aretin-tenda Ny olan'ity natiora ity dia vokatry ny olan'izy ireo satria izy ireo no, amin'ny ambaratonga lehibe kokoa, dia mety hiteraka hatsika na hamafin'ny fihoaram-pefy.
Aretina iharan'ny alika amin'ny feo
Na dia marina aza fa misy ny aretina izay misy fiantraikany amin'ny taova sasany sy ny fiasan'ny anatomin'ny alika, dia misy ihany koa ny aretina fitiavana ny larynx.
Ireo dia mety ho olana amin'ny natiora mifindra izay manelingelina ny fiasan'ny tabilao alika miteraka fahaverezan'ny fahaizany mivovo; miaraka amin'ny fisian'ny holatra, maloiloy ary kohaka (mazàna rehefa mihinana na misotro ny alika).
Izany no antony ny harness dia afaka mampihena be ireo fanafihana amin'ny larynx ireo ny biby ary noho izany dia sorohy ny momba ny tendany amin'ny fihenjanana be.
Tsy mihoatra ny rehetra izy io mamaivay ny rafitra fanamafisam-peo, zavatra iray izay miteraka fahosana, tsy fahaizan'ny mikitroka ary na ny aphorism aza ary ny niandohany dia mety vokatry ny kohaka na ny fitrandrahana be loatra. Ny niandohan'ity kohaka mitohy ity dia mety noho ny antony hafa izay tsy voatery voatery hifandray amin'ny aretina fa mety hitarika iray hafa koa.
Fivontosana, fivontosan'ny taonina ary kohaka kennel
Ity kohaka ity dia mety hitranga vokatry ny aretin-koditra na faritra hafa amin'ny tenda, fivontosana na kohaka kennel. Noho izany, noho ny fanasitranana azy dia ilaina ny mitsabo ny antony voalohany ary ny veterinera dia ho tompon'andraikitra amin'ny fandinihana izany sy ny fandaminana ny fitsaboana sahaza azy.
Amin'ny tranga faran'izay henjana indrindra, ny alika dia tsy mbola nanana fizarana naharitra mivovo na ny mikohaka, fa amin'ny fomba mitovy aminy very ny hodi-kazo, dia misy a tranga mararin'ny larynx.
Na dia hita fotsiny aza ity tranga ity amin'ny karazana alika lehibe toy ny Labrador, ny Golden Retriever, ny Irlandey Setter na ny Saint Bernard, amin'ny karazana toy ny Siberian Husky na ny English Bull Terrier, kilema ity dia kilemaina nolovaina.
Ny sasany amin'ireo fambara an'io aretina io dia ny feo mierona rehefa miaina mandritra sy aorian'ny fanaovana fanatanjahan-tena, izay miafara amin'ny fisehoan-javatra mandritra ny fialan-tsasatra ary amin'ny tranga mihoampampana dia mihalemy fotsiny ny fangalarana mandra-pahatongany ho tsy henoina tanteraka ary eto no ilana fidirana an-tsehatra marefo kokoa hamahana ny olana.
Antony hafa mahatonga ny alikanao tsy hivily
Ho fanampin'ireo aretina efa hitanay, ary afaka manazava ny antony mahatonga ny alikanao hijanona tsy hiteny intsony, dia misy antony hafa mety hiteraka an'io fihetsika io. Mety ho fantatrao fa manana ny fampahalalana azo atao rehetra.
Amin'izany fomba izany, raha mahatsikaritra fihetsika hafahafa ao amin'ny biby fiompinao ianao dia ho fantatrao ny fomba hizahana mialoha ireo olana, ary miaraka aminy, andramo ny famahana azy ireo amin'ny fomba mety kokoa. Anisan'ireny antony ireny ianao izao:
Raha apetraka toy izany dia toa masiaka be. Ary izany dia. Tahaka io fironana io taona maro lasa izay izay nahazatra ny nanapaka ny rambony sy ny sofin'ny alika sasany, dia maro ankehitriny no esorina amin'ny tadim-peo.
Araka ny lazain'ny anarany dia Fandidiana hanalana ny tadiny amin'ny alika io. Amin'ity fomba ity dia tsy hikorontana intsony izy. Raha ny marina dia zavatra ataon'izy ireo amin'ny alika kely maro izany mba hivarotana azy ireo tsara kokoa, nefa mbola masiaka aminy ihany.
Ataovy ao an-tsaina fa ny fikorisa, ary koa ny feo azony atao, dia ao anatin'ny fifampiresahan'izy ireo, ary tsy ekeninao izany.
Antony iray hafa mahatonga ny alikanao tsy hiondrika dia noho ny trauma. izany dia mahazatra kokoa amin'ny alika izay natsangana, satria izy ireo dia mety nanana fanandramana ratsy tamin'ny tompony teo aloha, ohatra, izay nampiasa fomba nahatonga ny biby hatahotra foana ny hitabataba, ny sazy, na ny collars mahazatra hiadiana amin'ny hodi-kazo aza.
Indraindray, amin'ny faharetana, fitiavana ary fanampiana kely avy amin'ny manam-pahaizana dia azonao atao ny manafoana izany fihetsika izany, saingy sarotra be izany ary sarotra amin'izy ireo ny manadino ireo fotoana niainany. Toy izany koa no mety hitranga raha misy ny trauma ao amin'ny fianakaviana onenany, satria ampifandraisiny amin'ny famonoana izany.
Olana mifandraika amin'ny fitrandrahana ihany koa ny moana. Ary izany dia, raha tsy maheno ny fofonain'ny sasany ianao dia tsy hikofoka. Ary amin'ny tsy fihainoany ny azy dia tsy tena fantany raha mibontsina izy na tsia, ka izany no mahatonga ny alika maro hijanona satria tsy mihaino ny tenany izy ireo.
Amin'ity tranga ity dia mety misy vahaolana ny marenina, saingy misy ny toe-javatra izay, na noho ny aretina mahazo azy, na noho ny taonany ... dia tsy mamela toerana be loatra ho an'ny mpitsabo biby izy ireo.
Karazan'alika izay tsy mivonto
Farany, te hiresaka aminao momba ny karazana alika tsy mivonika izahay. Mety ho antony iray tsy anaovan'ny alikanao azy koa io, ary maro amintsika no manadino fa ny karazana alika tsirairay dia manana toetra mampiavaka azy izay azo taratra amin'ny alikao.
Raha ny marina dia tsy hoe tsy mivofoka izy ireo, saingy azo antoka fa tsy mivovo matetika, ary indraindray afaka manome ny fiheverana fa tsy nanan'izy ireo mihitsy izany. Ohatra, manana ny labrador retriever ianao, alika tena tia milalao sy be fitiavana, fa ny iray kosa izay tsy mivovo be loatra. Raha ny marina dia manao izany rehefa misy ny tena loza; na ny alika Newfoundland, izay lehibe dia lehibe ary manintona ny saina, fa aza mivoraka matetika (toy ny Saint Bernard). Ny karazany hafa dia mety ny Great Dane, izay lehibe dia lehibe, nefa mangina ihany koa; na ny Siberian Husky, alika izay tena tsy dia mivily, ary rehefa manao izany dia toa midradradradra noho ny tena hodi-kazo.
Amin'ny karazana kely, misy ihany koa ny sasany izay somary mivovo, na angamba tsy dia, toa ny bulldog na ny pugs.
Amin'ity tranga ity dia tsy azo angatahana hivovo be izy io raha toa ka efa karazany tsy.
Inona no hatao mba hitifiran'ny alika ahy indray?
Ankehitriny rehefa hitanao ny aretina sy ny antony mety hampiato ny alika anao, dia azo antoka fa te hahafantatra izay hatao ianao mba hamerenany izany amin'ny toetrany mahazatra. Ny marina dia Ny lafiny rehetra izay niova tamin'ny alikanao dia mitaky fitsidihana ny mpitsabo biby.
Voalohany indrindra, ny manam-pahaizana dia hanombana ny biby fiompinao, ankoatry ny fihainoana izay lazainao momba ny fiovan'ny fitondran-tena, raha nisy zavatra niseho hanamarinana io fahanginana io sns. Raha vantany vao voamarina ny zava-drehetra dia azonao atao ny mametraka azy amin'ny fitsapana sasany. Ilaina izy ireo hahafahana manome diagnostika araka izay azo atao, noho izany, aza matahotra ny volavolan-dalàna; na dia manana teti-bola tery aza ianao dia tokony hampandre izany.
Vita ny zava-drehetra, hanome valiny anaoNa noho ny aretina, trauma, na aretina ... Raha toa ka mampiavaka ny karazany dia azo atao ny tsy misy na inona na inona atao, fa kosa mangataka anao mba hijery azy io mba hahitana raha tsy mivonto izy, na manao izany izy ireo kely tsy tadidinao.
Miaraka amin'ny aretina, maro no azo vahana amin'ny alàlan'ny fitsaboana mifototra amin'ny fanafody manokana momba ny aretina mahazo anao. Saingy misy ny sasany izay tsy azo ovaina, ary ny biby dia tsy maintsy mampifanaraka amin'ny fiainana miaraka amin'izy ireo.
Ary farany, safidy hafa azonao raisina dia mankanesa any amin'ny manam-pahaizana momba ny fitondran-tena biby. Ireo dia toy ny "psikology" an'ny alika, ary manampy azy ireo hanova ny toe-tsainy ary hiverina amin'ny toetrany taloha. Raha ny marina dia iray amin'ireo vahaolana tsara indrindra io raha niaritra trauma ilay alika satria manampy azy ireo hamakivaky io fotoana io sy hahazoany ny fahatokisany tena sy ny fifaliany.
Ho soso-kevitra, mba hanampiana ny alikao hitsoaka indray, Azonao atao ny mieritreritra ny hitondra azy handeha hitsangatsangana amin'ny alika hafa. Tsy izany ihany fa milalao sy mifandray amin'izy ireo koa. Zava-dehibe izany satria manampy azy ireo hahita fa tsy ratsy io fihetsika io (mihombo) fa anisany.
Raha toa ka voan'ny tadim-peo ny aretina, fa azo avadika, dia azonao atao ihany koa ny mampiasa fanafody ao an-trano, toy ny fampidirana ny tenda, mba hanalefaka azy io ary hahatonga azy tsy harary. Ny tanjona dia ny ho sitrana haingana araka izay tratra mba hodi-kazo indray.
Na dia mahatonga azy ireo tsy hiteny intsony aza ny aretiny, manana fomba fifandraisana bebe kokoa amin'ny alika na olona izy ireoTsy tokony hariana izy ireo noho izany antony izany na mieritreritra fa tsy mahasoa intsony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Aretina manakana ny alika tsy hibontsina
Ny alikako dia manao feo toy ny hoe tsy afaka mitroka amin'ny tendany, tsy nahazo azy nipetraka tamin'ny alika maro intsony isika, inona izany?
mety hampidi-doza izaitsizy ireo toe-javatra ireo na inona ny vokatra lehibe mety ho taratr'izy ireo Manana chihuahua aho izay nijanona tsy nipoitra tokony ho 5 andro lasa izay. fa misakafo tsara izy ary misotro rano ary mihetsika nefa tsy ela akory izay dia alika lehibe kokoa no maty
M.eugenia dia hoy izy:
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nahenan'ny alika ny fofona, tokony hofako be raha misy maneno lakolosy ... izay zara raha manome hodi-kazo izao.
Valiny tamin'i M.eugenia
Nijanona tsy nijanona ny alikako fa raha mihinana ny sakafony ... nefa izao tsy misotro rano be dia be ... mody mandoa ... inona no azoko atao na omena azy
Ahoana no hahalalana raha vavy na lahy ny alika kely?